पोखरामा पारस शाहसँग जहाँपनि एकसाथ देखिने यी युवती र बाबु को हुन् ? हेर्नुहाेस – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पोखरामा पारस शाहसँग जहाँपनि एकसाथ देखिने यी युवती र बाबु को हुन् ? हेर्नुहाेस
admin June 2, 2020 जीवनशैली, समाचार 0
धेरैलाई थाहा छ पूर्व युवराज पारस शाह अहिले पोखरामा छन् । लकडाउन अघि पोखरा पुगेका उनी अहिले त्यहाँ नै रमाएर बसेका छन् । उनी थुप्रै नेपालीको टिकटकमा छाइरहेका छन् । टिकटकमा आफु अब काठमाडौ नफर्किने पोखरामा नै बस्ने भन्ने गरेका छन् । यहाँहरुलाई पारस शाह भिजे तथा मोडल सोनिका रोकायासँग मुस्ताङ घुम्न गएको खबर भाइरल भएको थाहा नै छ । उनी मुस्ताङ हेलिकोप्टरमा उडेर गएको भिडियो आएको थियो । यति मात्र हैन उनीसँगै हेलिकोप्टरमा अर्की एक युवती थिइन् ।
उनले फेसबुकमा नै दाजु बहिनीको माया भन्दै पूर्व युवराज पारस शाहसँग भाइटिका लगाएका तस्विर पोष्ट गरेकी छिन् । नेपाली टोपीमा सजिएर खिचिएको त्यो तस्विर भाईटिकापछि खिचिएको हो भन्ने सजिलै अनुमान लगाउँन सकिन्छ । यसैले उनीहरुको नाता सम्बन्ध दाजु बहिनीको छ भन्न सकिन्छ । भाईटिका लगाएको तस्विरमा उनले लेखेकी छिन् । दाजु बहिनीको सम्बन्ध रगतले मात्र तय गर्दैन । The bond betweenabrother and Sister is not decided by blood , It is enternally blessed 🙏🙏 यहाँ के प्रष्ट हुन्छ भने पारसले यी युवतीसँग बहिनीको सम्बन्ध बनाएका छन् । पूर्व राज ज्ञानेन्द्रका छोरी एक जना मात्र हुन् । अर्थात पारस शाहकी बहिनी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह हुन् । ३० डिसेम्बर २०१९ को पारस शाहको जन्मदिनमा उनै तृष्णाका साथमा पारस, छोरी पूर्णिका, अर्की छोरी र छोरा ह्दयन्द्र सहित पारिवारीक जमघटपनि देख्न सकिन्छ ।
जब सलमानले सिद्धार्थको मृत्युलाई लिएर मजाक गरे, अचम्म त्यस्तै भैदिय‍ो … (भिडियो)